Abacre Ụlọ nkwari akụ Management System - isi Page
Abacre Ụlọ nkwari akụ Management System
Iru akara na nke a ọzọ ọgbọ nkwari akụ management software!
Download zuru-apụta 30-ụbọchị ikpe mbipute ( 6,30 MB)
Top 10 ihe ịzụta Abacre Ụlọ nkwari akụ Management System
Abacre Ụlọ nkwari akụ Management System bụ ọgbọ ọhụrụ nke nkwari akụ / ụlọ ndina management software maka Windows. Ọ bụ zuru ngwọta, na-amalite na abụọ na-elele na / lelee, na-agwụcha na ịgba ụgwọ na ụtụ isi akụkọ. Ojii interface na-ọma kachasị n'ihi na elu ọsọ ọsọ ọsọ na mgbochi nke nkịtị ndudue. Ọ mere maka iji na otutu kọmputa, na e nwere pụrụ ịdabere na ala ikike na ọkwa.
Ihe omume ahụ nwere ike melite ọ bụla ego, ụtụ isi, na gratuities. Ịkwụ ụgwọ ga-anabata ego, kaadị akwụmụgwọ, ma ọ bụ akwụkwọ ndenye ego.
N'ihi na ndị njikwa, e nwere bụ ọgaranya set nke kọrọ na-egosi na a zuru foto nke nkwari akụ arụmọrụ na ndụ cycles: ahịa site na ụlọ, ahịa site na ụlọ ụdị, ahịa iwu na ụlọ oriri na ọṅụṅụ ma ọ bụ mkpọsa, ịkwụ ụgwọ ụzọ, na akpaka ụtụ isi calculations.
Site standardizing dum nkwari akụ management usoro, software n'ịgbanwe mma àgwà nke ọbịa njikwa na aza ajụjụ.
Ọ dị mfe iji wụnye na mfe iji. Nnọọ oké ọnụ ikikere enye ohere a software ọ bụla ga-eji na gburugburu ebe obibi site na obere ezinụlọ-nwe hotels na nkwari akụ ka nnukwu ígwè.
Watch obere video Nkuzi na Youtube:
Mfe nlele na na lelee
Ndoputa, lelee na na lelee
Complete ozuzo: ndoputa, chọpụta na, oriri na ọṅụṅụ si ka na lelee